कालाको मृत्युमा गोरालाइ पिर :अमेरिकी प्रहरीले दमन छोडी घुडा टेकेर माफी मग्दै नेपालीले सिक्नि कहिले? - satkar post
कालाको मृत्युमा गोरालाइ पिर :अमेरिकी प्रहरीले दमन छोडी घुडा टेकेर माफी मग्दै नेपालीले सिक्नि कहिले?
जेठ, २१ एजेन्सी :- एक प्रहरीले घाटी थिचि अमेरिकी काला जातिका जर्ज फ्लोइडको ह’त्यर गरेपछि अमेरिकी जनताको विरोधले दिन प्रतिदिन उग्र रुप लियो । राजधानी वासिङ्टन डिसी समेत देशका २०० शहरमा विशाल प्रदर्शन भयो ४० भन्दा बडी शहरुमा कर्फ्यू लगाएर शंकटकाल घोषणा गरियो हजारौं प्रहरी तैनाथ गरियो र आन्दोलन थेग्न नसकेपछि सेना पिचालनको तयारी गरियो।
कोभिड १९ बाट आक्रान्त जनताले कुनै पनि प्रवाह नगरी ज्यानदिएर तोडफोड र आगजनिमा उत्रिए । सुरुमा काला जाति मात्रैले विरोध गर्लान भनेको गोराहरुले झन अग्रभागमा रहेर मान्छे मार्ने र रंगभेदको आधारमा होच्याउने नलाएक प्रहरी प्रति आम नागरिक सडकतिर आए। तर राष्टपति ट्रम्प विशाल सडकको भिड देखेपछि चकित परे। सुरक्षा खतराका कारण बंकर भित्र बस्न बाध्य भए। र दमन गर्ने आदेेश दिए।
तर अमेरिकी प्रहरी प्रमुखले उनलाइ ठाडै जवाफ दिदिए तपाइले परिस्थिति समाल्न नसक्ने भए चुप बस्नु होस्। जनता मार्न पाइन्न। तब उनले सम्पूर्ण प्रहरीलाइ एकसाथ निर्देशन दिए अब आन्दोलनकारी
जनता सामु हात जोडेर घुडा टेक्नु बाहेक अरु गर्न नसकिने भन्दै उनले सुझाए र अहिले अमेरिकी प्रहरीले आन्दोलन कारीहरुको सामु हात जोडेर घुडा टेकिरहेको छ । उनिहरु संगै मृतकको चिरसान्तीको कानामा गरिरहेको छ। र दोषीलाइ जनताको आदेश अनुसारको कार्बाही गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छ। यसले केहि रुपमा आन्दोलनकारी सान्त देखिएका छन।
यदि तेहि खालको प्रर्दशन नेपालम हुदो होत कति जनाको ज्यान जान सक्थ्यो होला भने कयौं अंग भंग हुन्थ्य। अर्को कुरा नेपालमा हुने जतिपनि विभेदको घटनाहरु हुन्छन तेसमा उत्पिडित बाहेक अरुमा विभेद बाहेक कुनै मानवियता देखिदैन । विषेश गरि जातिय विभेदमा त झन कथित उपल्लो समुदायले कहिल्यै समधानको स पनि चाहादैनन् र उत्पिडनका पक्षमा रहन्छन। यसर्थ अमेरिकी जनता र पुलिस बाट नेपालका जनता र प्रहरीले कहिले सिक्ने यस्तो संस्कार जहाँ मनवले मानवता देखावस दानवता हैन। ठुलो देशको ठुलै संस्कार र मन हुन्छ भन्ने उदाहरण अहिले अमेरिकी प्रहरी र आन्दोलनकारी गोरा जातका जनताले देखाएका छन।